भिडियो स्टोरी : डा. शर्मा पौडेल—हिम्मतले बनेका डाक्टर - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ भिडियाे ∕ भिडियो स्टोरी : डा. शर्मा पौडेल—हिम्मतले बनेका डाक्टर
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७७ भदौ ३ गते, १७:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं—डा. शर्मा पौडेल त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका रेडियोलोजीका एशोसियट प्रोफेसर हुन् । उनी ११ वर्षदेखि त्रिविको फ्याकल्टीका रुपमा कार्यरत छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिष्ट डा. पौडेल पर्वतमा जन्मिएका हुन् । सानै छँदादेखि उनका खुट्टाले काम गर्न छाडेका थिए । धेरै अस्पतालहरुमा चहार्दा पनि उनको खुट्टाले सोचेजस्तो लय समात्न सकेन् ।
तर, पौडेलले खुट्टाले हिड्न साथ नदिएपनि आफ्नो जीवनको गति रोकेनन् । नयाँदिल्लीस्थित एम्समा उपचारका क्रममा भेटिएका चिकित्सक र नर्सले डाक्टर बन्नुपर्छ भनेर दिएको प्रेरणाको फेरलाई समात्दैं उनी साहसको बलमा आफ्नो लक्ष्य नापिरहे ।
हिम्मतिलाहरुका लागि खुट्टा नै चल्नुपर्छ भन्ने केही छैन्, उनले देखाइदिए खुट्टा नचले पनि लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ । मुलुककै प्रतिष्ठित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र अस्पतालसम्मको उनको यात्रा पक्कै सहज थिएन् । बाटोमा आएका अवरोधलाई पन्छाउँदैं उनी हिम्मतका साथ आफ्नो लक्ष्यमा डटिरहे । ११ वर्षदेखि तिनै हिम्मतिला चिकित्सक त्रिविमा अध्यापन र उपचारमा खटिरहेका छन् । बाँकी उनकै शब्दमाः
भिडियो स्टोरी : क्यान्सरका बिरामीले कोभिड भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने…
भिडियो रिपोर्ट : फुड पोइजनिङ के हो ? यो किन…
भिडियो स्टोरी : आँखामा देखिने समस्या र समाधानका उपाय
भिडियो स्टोरी : आँखाको चश्मा हटाउन गरिने रेफ्रयाक्टिभ सर्जरी के…